के तपाईंको भान्सा कोठामा सिलिन्डर बम त छैन? यसरी हेर्न सकिन्छ सिलिन्डरको म्याद
सुजन पाठक / एल पि ग्यास सिलिन्डरको पनि म्याद हुन्छ। म्याद गुज्रेको सिलिन्डर प्रयोग गर्नु भनेको बम राख्नु जस्तै खतरनाक हो। उपभोक्ताहरुले सिलिन्डर किन्दा, सट्टा गर्दा यसको वजन र सिलमा मात्र ध्यान दिएको पाइन्छ तर धेरैलाई आफुले किनेको सिलिन्डरको म्याद बाँकी छ छैन थाहा हुदैन। यसैको फाइदा उठाएर कतिपय ग्यास कम्पनीहरुले पनि म्याद सकिएको सिलिन्डर पुन: बजारमा पठाउछन् र यसै कारणले पनि बिभिन्न ठाउँमा सिलिन्डर पड्किएर दुर्घटनाहरु हुने गरेका छन्।
सिलिन्डरको म्याद कसरी थाहा पाउने ?
सिलिन्डरको माथिल्लो भागमा गोलो रिङ हुन्छ। यसको तल ३ पट्टि हुन्छ र ३ पट्टी मध्ये एउटा पट्टिमा कालो वा सेतो रङ्गले सिलिन्डरको मिति लेखिएको हुन्छ। यसको अग्रेजीमा A, B, C, र D अक्षरको साथमा “अंक” पनि लेखेको हुन्छ।
जस्तै:- A अक्षरको मतलब अग्रेजी महिनाको ३ महिना सम्म हुन्छ। उदाहरण :- (जनवरी, फेव्रुवरी, मार्च) सम्म।
– B अक्षरको मतलब (अप्रील, मे, जुन) हुन्छ।
– C अक्षरको मतलब (जुलाइ , अगस्ट, सेप्टेम्बर) हुन्छ।
– D अक्षरको मतलब (अक्टुबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर) हुन्छ।
यदि सिलिन्डरमा A- 30 लेखिएको छ भने म्याद सकिने मिति मार्च २०३० रहन्छ। त्यस्तै यदि C-29 लेखेको हुन्छ भने म्याद सकिने मिति सेप्टेम्बर २०२९ सम्म रहको बुझ्नु पर्दछ।
यो साथै हरेक सिलिन्डरको माथिल्लो भागमा सिलिन्डर टेस्ट गरिएको मिति खोपिएको हुन्छ। त्यहाँ खोपिएको मितिबाट १० बर्ष सिलिन्डर प्रयोग गर्न योग्य हुन्छ जस्तै १-२० लेखिएको छ भने सो सिलिन्डर मार्च २०३० सम्म प्रयोग गर्न योग्य रहन्छ।
दुर्घटना न्युनिकरण गर्न प्रयोगकर्ता आँफै सचेत रहन जरुरी छ।